အထူးသတိထားကြပါ. . . - Tameelay
မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်ကြီးကျောက်ဂူတောရ ဆရာတော်ကြီးတို့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပျံလွန်တော်မူကြတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပါ…
မေတ္တာဓာတ်ကြီးမားသူတွေ ဆုံးရှုံးရတာဟာ ပုထုဇဉ်တွေအတွက်အကြောင်းမကောင်းလှပါဘူး…
သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ မေတ္တာဓာတ်ဟာ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအတွက် များစွာ အကာအကွယ်ပေးပါတယ်…
ဥပစ္ဆေဒက ကံတွေရဲ့ အကျိုးပေးဟာလည်း ဆန်းကြယ်လှပါတယ်…
သေတတ်တဲ့သဘောတရားရှိလို့ လူသေတာ မဆန်းပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အကုသိုလ်တွေရဲ့ အကျိုးပေးတွေဟာ ဆန်းကျယ်လှပါတယ်…
သူတော်ကောင်းတွေ ဥပစ္ဆေဒက ကံနဲ့ သေဆုံးသလို သာမန်လူတွေအစုလိုက်အပြုံ လိုက် မကြာခဏ သေဆုံးတာဟာလည်း အကုသိုလ်ကြီးမားလှတဲ့ အချိန်အခါ မို့ ပါပဲ…
သတ္တဝါတွေ အကုသိုလ်ကြီးလာပြီဆိုရင် ကယ်တင်မဲ့ သူတွေပါ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်တတ်တာဟာသဘာဝတရားပါပဲ…
အရှင်သာရိပုတြာမထေရ်မြတ်ကြီးတောင် အကုသိုလ်ကံ ကြီးမားလှတဲ့ ခလေးတရောက်ကို သာမဏေဝတ်ပေးပြီးကယ်မိလို့ ….
မထေရ်မြတ်ကြီး ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါ ဆွမ်းခံမရလို့ခလေးကို ထားခဲ့ပြီး တပါးတည်းဆွမ်းခံမှဆွမ်းခံလို့ ရပါတယ်….
ရဟန်းသံဃာတော်များကိုစော်ကားတဲ့ အရိယူပ ကံထိုက်တဲ့သူများနေတဲ့ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ ….
အကယ်ခံရမဲ့သူတွေရဲ့ အကုသိုလ်ကံကြောင့် ကယ်မဲ့သူတွေပါ ရောပြီး ပျက်စီးတတ်တာ သံဝေဂယူစရာကောင်းလှပါတယ်….
ငါကတော့ သာသနာတော်အတွက် လုပ်နေတာပဲ ငါကတော့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ကြပါနဲ့ …..
ဗုဒ္ဓက သတ္တဝါတဦးဟာ သံသရာမှာ မပြု လုပ်ဘူး တဲ့အကုသုလ်မရှိဘူးလို့ ဟောထားပါတယ်….
အကုသိုလ် အကျိုးပေးချိန်ငါးချိန် ရှိပါတယ်….
၁ ။အချိန်မဲ့ အခါမဲ့ သွားလာချိန်
၂ ။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ကင်းမဲ့ချိန်
၃။ ပြောမှား ဆိုမှာ လုပ်မိချိန်
( စကားအပြောအဆိုကြောင့် ဒုက္ခရောက်တာကို ပြောတာပါဒီအချိန်မှာ အဲလိုလူတွေ အများကြီးတွေ့ ရနိုင်ပါတယ်)
၄ ။မတော်တဲ့အခါ နေမိချိန်( သူများရန်ဖြစ်တဲ့အချိန် မှာကိုယ်ကအနားမှာ ရှိနေချိန်မျိုးကိုပြောတာပါ )
၅။ ခေတ်ဆိုး ခေတ်ပျက် ကြုံတွေ့ ချိန်
သံသရာကမကောင်းမှု့တွေဟာလူတွေရဲ့ အကုသိုလ်ကြီးမားချိန်မှာ ဝင်ရောက်အကျိုးပေးတတ်ပါတယ် …
အထူးသဖြင့် အခုလို ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက်ကြုံတွေ့ ချိန်မှာ ဝင်ရောက်အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့် လူတွေ အစုလိုက်အပြုံ လိုက်သေတာမျိုးတွေ အံ့သြစရာစေခြင်းတရားနဲ့ သေတာမျိုးတွေ…
( ကုန်းမြင့်ဒေသမှာ ရေကြီးလို့ ရေနစ်သေတာတွေ ဟိုတလောက လေယာဉ်ပျက်ကျလို့အောက်က ခလေးတရောက် စာကျက်နေရင်းသေတာမျိုးတွေ )
ကြုံ တွေ့ ရသလို သူတော်ကောင်းတွေ ရုတ်တရက် သေတာမျိုးတွေ လည်း ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါတယ်…
ဒါဟာ အကြောင်းတရားမကင်းတဲ့အကျိုးတရား သေခြင်းမျိူးတွေပါပဲ….
ဒါ့ကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အထူးသတိထားရမှာက ရတနာသုံးပါးကို စော်ကားလို့ ရရှိတဲ့ အရိယူပ ကံမထိုက်အောင်သတိထားကြပါ…
တသံသရာလုံးက ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေက ဝင်ရောက် အကျိုးပေးနေလို့သူတော်ကောင်းရယ် သူရဲကောင်းရယ် သာမာန်လူရယ် မခွဲ ခြားပါဘူး….
သတိတချက် လွတ်တာနဲ့ သေဆုံးတတ်ပြီး သာသနာနဲ့ လွဲ ရတတ်တာမို့ …အထူးသတိထားကြပါ….
သေခြင်းတရားဆိုတာ သေသင့်လို့သေရတာရှိသလို မသေသင့်တဲ့ အချိန်တွေမှာ သေရတာလည်း ရှိပါတယ်….
သေခြင်းခုနစ်မျိုး ရှိတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သိပါလ်ိမ့်မယ်….
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ …အပြောအဆို ၊ အနေအထိုင် အစစ အရာရာ ပညာဥာဏ်နဲ့ ယှဉ်နိုင်ကြပါစေ….
မွိုငျကွီးငူ ဆရာတျောကွီးကြောကျဂူတောရ ဆရာတျောကွီးတို့ဆကျတိုကျဆိုသလို ပြံလှနျတျောမူကွတာဟာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ဝမျးနညျးစရာပါ…
မတ်ေတာဓာတျကွီးမားသူတှေ ဆုံးရှုံးရတာဟာ ပုထုဇဉျတှအေတှကျအကွောငျးမကောငျးလှပါဘူး…
သူတျောကောငျးကွီးတှရေဲ့ မတ်ေတာဓာတျဟာ ကမ်ဘာသူကမ်ဘာသားတှအေတှကျ မြားစှာ အကာအကှယျပေးပါတယျ…
ဥပစ်ဆဒေက ကံတှရေဲ့ အကြိုးပေးဟာလညျး ဆနျးကွယျလှပါတယျ…
သတေတျတဲ့သဘောတရားရှိလို့လူသတော မဆနျးပမေဲ့ ခုနောကျပိုငျးမှာ အကုသိုလျတှရေဲ့ အကြိုးပေးတှဟော ဆနျးကယျြလှပါတယျ…
သူတျောကောငျးတှေ ဥပစ်ဆဒေက ကံနဲ့သဆေုံးသလို သာမနျလူတှအေစုလိုကျအပွုံ လိုကျ မကွာခဏ သဆေုံးတာဟာလညျး အကုသိုလျကွီးမားလှတဲ့ အခြိနျအခါ မို့ပါပဲ…
သတ်တဝါတှေ အကုသိုလျကွီးလာပွီဆိုရငျ ကယျတငျမဲ့ သူတှပေါ ပိုပွီး ဒုက်ခရောကျတတျတာဟာသဘာဝတရားပါပဲ…
အရှငျသာရိပုတွာမထရျေမွတျကွီးတောငျ အကုသိုလျကံ ကွီးမားလှတဲ့ ခလေးတရောကျကို သာမဏဝေတျပေးပွီးကယျမိလို့….
မထရျေမွတျကွီး ဆှမျးခံကွှတဲ့အခါ ဆှမျးခံမရလို့ ခလေးကို ထားခဲ့ပွီး တပါးတညျးဆှမျးခံမှဆှမျးခံလို့ရပါတယျ….
ရဟနျးသံဃာတျောမြားကိုစျောကားတဲ့ အရိယူပ ကံထိုကျတဲ့သူမြားနတေဲ့ခုလိုခတျေကွီးမှာ ….
အကယျခံရမဲ့သူတှရေဲ့ အကုသိုလျကံကွောငျ့ ကယျမဲ့သူတှပေါ ရောပွီး ပကျြစီးတတျတာ သံဝဂေယူစရာကောငျးလှပါတယျ….
ငါကတော့ သာသနာတျောအတှကျ လုပျနတောပဲ ငါကတော့ကောငျးတာလုပျနတောပဲ ဘာမှမဖွဈနိုငျဘူးလို့ မထငျကွပါနဲ့…..
ဗုဒ်ဓက သတ်တဝါတဦးဟာ သံသရာမှာ မပွု လုပျဘူး တဲ့အကုသုလျမရှိဘူးလို့ဟောထားပါတယျ….
အကုသိုလျ အကြိုးပေးခြိနျငါးခြိနျ ရှိပါတယျ….
၁ ။အခြိနျမဲ့ အခါမဲ့ သှားလာခြိနျ
၂ ။မိတျကောငျးဆှကေောငျး ကငျးမဲ့ခြိနျ
၃။ ပွောမှား ဆိုမှာ လုပျမိခြိနျ
( စကားအပွောအဆိုကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျတာကို ပွောတာပါဒီအခြိနျမှာ အဲလိုလူတှေ အမြားကွီးတှရေ့နိုငျပါတယျ)
၄ ။မတျောတဲ့အခါ နမေိခြိနျ( သူမြားရနျဖွဈတဲ့အခြိနျ မှာကိုယျကအနားမှာ ရှိနခြေိနျမြိုးကိုပွောတာပါ )
၅။ ခတျေဆိုး ခတျေပကျြ ကွုံတှခြေိ့နျ
သံသရာကမကောငျးမှု့တှဟောလူတှရေဲ့ အကုသိုလျကွီးမားခြိနျမှာ ဝငျရောကျအကြိုးပေးတတျပါတယျ …
အထူးသဖွငျ့ အခုလို ခတျေဆိုးခတျေပကျြကွုံတှခြေိ့နျမှာ ဝငျရောကျအကြိုးပေးတတျပါတယျ…
ဒါ့ကွောငျ့ လူတှေ အစုလိုကျအပွုံ လိုကျသတောမြိုးတှေ အံ့သွစရာစခွေငျးတရားနဲ့သတောမြိုးတှေ…
( ကုနျးမွငျ့ဒသေမှာ ရကွေီးလို့ရနေဈသတောတှေ ဟိုတလောက လယောဉျပကျြကလြို့ အောကျက ခလေးတရောကျ စာကကျြနရေငျးသတောမြိုးတှေ )
ကွုံ တှရေ့သလို သူတျောကောငျးတှေ ရုတျတရကျ သတောမြိုးတှေ လညျး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ…
ဒါဟာ အကွောငျးတရားမကငျးတဲ့အကြိုးတရား သခွေငျးမြိူးတှပေါပဲ….
ဒါ့ကွောငျ့ ဓမ်မမိတျဆှမြေား အထူးသတိထားရမှာက ရတနာသုံးပါးကို စျောကားလို့ရရှိတဲ့ အရိယူပ ကံမထိုကျအောငျသတိထားကွပါ…
တသံသရာလုံးက ပွုလုပျခဲ့ဘူးတဲ့ အကုသိုလျကံတှကေ ဝငျရောကျ အကြိုးပေးနလေို့ သူတျောကောငျးရယျ သူရဲကောငျးရယျ သာမာနျလူရယျ မခှဲ ခွားပါဘူး….
သတိတခကျြ လှတျတာနဲ့သဆေုံးတတျပွီး သာသနာနဲ့လှဲ ရတတျတာမို့…အထူးသတိထားကွပါ….
သခွေငျးတရားဆိုတာ သသေငျ့လို့ သရေတာရှိသလို မသသေငျ့တဲ့ အခြိနျတှမှော သရေတာလညျး ရှိပါတယျ….
သခွေငျးခုနဈမြိုး ရှိတာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ သိပါလိမျ့မယျ….
ဓမ်မမိတျဆှမြေား …အပွောအဆို ၊ အနအေထိုငျ အစစ အရာရာ ပညာဉာဏျနဲ့ယှဉျနိုငျကွပါစေ….
ပိုက်ဆံလည်း မကုန် အချိန်လေး၁မိနစ်လောက်ပေးယုံနှင့် အဖြေရတဲ့ နည်းမို့ လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ် သာမာန်ဇွန်းတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လျှာတစ်ချောင်းလုံးကို ပွတ်လိုက်ပါ။ ဇွန်းတစ်ချောင်းလုံး သွားရည်တွေစိုစွတ်နေပါစေ။ အဲ့ဒီနောက် အိတ်အကြည်တစ်လုံးကိုယူပြီးတော့ စတီးဇွန်းကို အိတ်ထဲထည့်လို့ ၎င်းအိတ်ကို အလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါ။( နေရောင် သို့ မီးချောင်း၊မီးလုံး) တစ်မိနစ်စောင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အဲ့ဒီဇွန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဇွန်းတစ်ချောင်းလုံးက …
သတိထားဆက်ဆံရမယ့် သင့်နားက လူ (၈) မျိုး
၁။ တင်စီးသူများ သူတို့အတွက် တင်စီးတာဟာ ယုံကြည်မှုရှိတာပါ။ မာနဟာ ဘဝနေထိုင်နည်းပါ။ ဘေးနားကလူတွေထက် အမြဲသာကြောင်းပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ ဒီလူ တွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး မပတ်သက်ပါနဲ့။ ၂။ မနာလိုသူ မနာလိုတာပါ။ သင်အောင်မြင်တာကို မကျေနပ်တာမျိုးတင် မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကို ပျော်နေတာပါ။ ဒီလူ …
မနက်စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့သူတွေ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ “စောစောထတဲ့ငှက်က အစာပိုဝတယ်” တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ လူသားတွေမှာလည်း ဝီရိယရှိရှိနဲ့ စောစောထ၊ ဘဝအစီအစဉ်တွေအတွက် မနက်ခင်းတွေကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်တဲ့သူတွေက အောင်မြင်မှုရဖို့ ပိုမို လွယ်ကူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မနက်စောစောဆိုတာ အရုဏ်တက်ချိန် ၄-၅နာရီကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက် …